Biolojia - Tambajotra nerônina, Oniversite Mahajanga, Taratr
ⓘ Biolojia - Tambajotra nerônina, Oniversite Mahajanga, Taratra elektrômanetika, Baobab, Ekolojia, Ra, Tsoka, Fory, Biolojia, Tavy, Androngo, Dinôzôro ..
Ny tambajotra nerônina dia teny hitononana ireo tambajotra nerônina voajanahary na voatrolombelona. Aminny taranjanny kajimirindra ny tambajotra nerônina dia midika tambajotra nerônina voatrolombelona, ary aminny taranjanny biolojia, ny tambajotra nerônina dia midika tambajotra nerônina voajanahary na biôlojika. Ity lahatsoratra ity dia hamaritra ny tambajotra nerônina voatrolombelona.
Ny Oniversite Mahajanga dia sekolim-panjakana ambaratonga ambony, miorina ao Mahajanga renivohitra faritra Boeny any aminny faritra avaratra andrefani Madagasikara no misy azy.
Ny taratra elektrômanetika dia fanakorontanana ny saha araka aratra ary araka andriamby. Ny mpitondra ny taratra elektrômanetika dia ny voankazavana, voanjavatra tsy manan-danja. Ny voankazavana dia ny boson miaraka aminny hery elektrômanetika. Aminny taranjanny fizika tsotra, ny famisavisana azy dia onja elektrômanetika izany hoe ny fiparitahanny saha manetika sy ny sahanaratra mifampijadona izy ireo mahitsy vokatry ny fiheringerenanny fahanaratra. Singana kelinny ilotro elektrômanetika ny hazavana izay hitanny maso.
Ny baobab dia hazo tsy misy afatsy any Madagasikara, Aostralia, Afrika. Madagasikara. Misy karazany 9 izy maneran-tany, ny 7 aminireo dia ao Madagasikara no misy azy ary 6 aminizay dia tsy misy afatsy ao ihany, no 2 kosa dia miparitaka aminireo faritra hafa voalaza etsy ambony. Hazo makadiry ny Baobab, izay mety hahatratra hatraminny 30 m ny haavony, misy koa anefa ireo izay somary fohifohy 4m na 5m. Mahasoandriana ity hazo ity satria dia mety ho velona mandritra ny 1000 taona na maherinizany aza izy raha tsy misy manimba. Mbola eo koa ireo voka-tsoa betsaka azo avy aminy, na fanafody izan ...
Ny Ekolojia "oikos" ; et λόγος. Ny Ekolojia dia fianarana siantifika ny zavatra mitranga mametra ny fizaràna sy ny fahabetsana ny zavamiaina. Siansa Biolojika ny ekolojia mianatra mombanny zavamiaina Biôsenôzy sy ny taranja fizika biôtôpy io zavatra rehetra manomehanny ekôsistema i Transley no namorona azy. Mianatra mombanny topa angôvo ny taranja réseaux trophiques sy ny enerjia mandendeha ao anatinny ekôsistema. Ny ekôsistema manondro ny fikambanana miaina sy tontolo manodidina tsy miaina.
Ny Ra dia ranoka mitondra ny okzizena any aminny sela mamelona ny olombelona, ny plasma, ilay ranoka, ny tena betsaka indrindra aminny lafinny "proportion" ; misy ra daholo ny biby rehetra. Izaraina ny diôkzizena sy ny sakafo ilainny "tissu" O 2 eraky ny vatana ny ilaina ny ra. Mitondra ny loto avoakanny "tissu" koa ny ra toy ny diôksida karbôna CO 2 na ny loto mizy nitirôzenina makany aminny valahana na makany aminny tsinay. Ilaina mitondra ny sely miaro sy manamaritaka ny hôrmôna eraky ny vatana koa ny ra. Ny tsoka ny manamboatra ny sela ny ra, ny anaranny tao manamboatra ny ra dia tenen ...
Ny tsoka, "tissu" velona any ampivoanny taolana be, dia manamboatra ny sela ny ra: Ny globule fotsy, ny globule mena sy ny plaquette. Manana karazana sela manokana ny tsoka: Ny CSH na foto-tsela mpanao ra) sy ny sela ny stirôma medullaire. Any aminny olom-belona, manamboatra ra daholo ny sela ny tsoka manomboka aminny fiterahana hatraminny dimy taona. Eo aorianizany, any aminny taolana fohy sy taolana fisaka ihany sisa ny manamboatra ra, indrindra ny sternum, ny taolan-tritry, ny taolan-damosina ary ny ila taola-maoja
Samihafa no andraisanny faritra ny teny hoe Fory eto Madagasikara; any aminny faritra Antsimonny Nosy ohatra dia fiteninolona matetika aty ny hoe Fory eny na dia eo mpianaka aza, ny tena marina ny dikanio teny io aty aminny Antsimo,ohatra aty toliara dia ilazana ny Fitombenana mety ho azo inoana iany raha ny dikanio teny io aty aminny faritra antsimo satria ny diksionera malagasy frantsay de milaza fa fory=anus)!!!! Teny gasy mazava tsara ny FORY izay entina hilazana ny fitombenana, ao anaty dikisionera malagasy izy io. Fa amin ny faritra maro kosa, ny teny hoe fory" dia entina milaza ny f ...
Fania Foza Maingoka Sifaka Soavaly Tana Trondro Varika Vitsika Biby mandady sy mikisaka:Ny tana sy ny fianankaviany;Ny Androngo sy ny fianankaviany ary ny Bibilava sy ny fianankavianay Vorona: Boloky Hala Maky: Boengy, Gidro, Komba, Maki Ny biby modaka:Ny sifotra sy ny mitovy aminy. Ny Voana:Ny voangory sy ny Voatraika sy ny sisa. Ny vorona
Aminny biolojia, ny tavy dia haavonny fandaminana sela eo anelanelanny tavy sy taova iray manontolo. Ny tambatsela dia fitambaranny sela mitovy aminy sy ny matrany ivelanny sela avy aminny fiaviana iray ihany izay miaraka manao asa manokana. Ny taova dia miforona aminny alàlanny fananganana vondrona miaraka amina tavy maro.
Ny androngo dia vondronny mandady miely, miaraka aminny karazany 6000 mahery, manerana ny kaontinanta rehetra afa-tsy ny Antarktika, ary koa ny ankamaroanny faribenny nosy ranomasina. Ny androngo sasany dia mifandray akaiky kokoa aminireo vondrona roa voaroaka ireo noho ny androngo hafa.
Ny dinôzôro dia vondrona mandady isan-karazany. Nipoitra voalohany izy ireo nandritra ny vanim-potoananny Triasika, teo anelanelanny 243 sy 233.23 tapitrisa taona lasa izay, na dia ny tena fiavianizy ireo sy ny fotoananny fivoaranny dinôzôro aza no foto-pikarohana mavitrika. Nanjary vertebrata terestrialy nanjakazaka izy ireo taorianny hetsika fandroahana Triasika – Jiorasika 201.3 tapitrisa taona lasa izay; nitohy ny fanjakanizy ireo nandritra ny vanim-potoana Jiorasika sy Kretasika.